China isizukulwane esitsha esiphathwayo somthi ophathwayo iselfowuni kwitshaja yefowuni ephathekayo PD100W ukwenziwa kunye nefektri | Staba Umbane
Isizukulwane samva nje esiphathwayo somthi ophathwayo iselfowuni itshaja yefowuni PD100W
1. Ubume obuncinci bokukhanya okulinganayo kubungakanani bepokotho.
2. Ukutshaja okukhawulezayo kokugcina amandla ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50.
3. Amandla aphezulu e-USB aphezulu (A / C) amazibuko ezixhobo eziphathwayo.
5. Ukusebenza okuphezulu kakhulu ukuya kuma-94%.
6.Ukusasazwa kwamandla kwezixhobo eziphathwayo.
*Ii-Usb ezininzi ezikhawulezayo zokutshaja i-100W Iinkcukacha zeNkcazo
Ishaja yodonga lwe-USB-C ilungele abasebenzisi abafuna itshaja ehambelana nekhaphukhaphu kwaye enamandla. Ukukhupha ukuya kuthi ga kwi-100 W, itshaja yodonga lwePD zonke izixhobo zakho ozithandayo kubandakanya nefowuni yakho, iNintendo Shintsha, kunye neMacBook (amaxesha okutshaja axhomekeke kwizicatshulwa zesixhobo).
Ifaka uguquko lwamva nje kwitekhnoloji yokutshaja ngesantya esiphezulu, ukuhanjiswa kwamandla kwe-USB-C kunye nokutshaja okuguqukayo okukhawulezayo, le tshaja inye kuphela oyifunayo ukuze unike amandla izixhobo zakho zangoku kwaye uhlale phambili kwigophe lazo naziphi na izinto zombane ezizayo. Omabini la mazibuko anokuhambisa ukuya kuthi ga kwi-watts ezili-18 zerhafu yombane ukuya kuyo yonke into ukusuka kwii-smartphones kunye neepilisi ukuya kwiilaptops ze-USB-C ezilambileyo ezinamandla njenge-12-intshi iMacbook. Ixhasa ukubiza ngokukhawuleza kwe-iPhone ukubiza i-iPhone 8 okanye kamva ukusuka kwi-zero ukuya kwi-50% kwimizuzu engama-30 ngentambo ebandakanywayo, kunye nezinye ii-smartphones / iipilisi ngesantya esiphezulu.
Ixhaswe ngobuchwephesha beGaN, le tshaja yi-30% encinci kunezinye iitshaja, icwecwe kakhulu ukuhamba nawe naphi na apho uya khona. Le tshaja icwecwe i-100W PD ngokuhanjiswa kwamandla kwe-USB kuthetha ukutshaja ngokukhawuleza kwezixhobo zakho ezinikwe amandla i-USB-PD. Le tshaja yodonga lwe-USB isetyenziselwa ukuhambisa amaxesha ama-5 amandla eeshaja eziqhelekileyo kwizixhobo ezininzi ngaxeshanye. Ifaka uguquko lwamva nje kwitekhnoloji yokutshaja ngesantya esiphezulu, ukuhanjiswa kwamandla kwe-USB-C kunye nokutshaja okuguqukayo okukhawulezayo, le tshaja inye kuphela oyifunayo ukuze unike amandla izixhobo zakho zangoku kwaye uhlale phambili kwigophe lazo naziphi na izinto zombane ezizayo.
Itshaja ye-PD eludongeni ngokuhambelana okuphezulu kunye nokuguquguquka, isisombululo sokutshaja ngambini esikwaziyo ukuxhasa zonke izixhobo ezinamandla ze-USBC kunye ne-USBA ezinje ngeefowuni kunye neeappops ukuze zisebenze ngokuzimeleyo okanye ngaxeshanye. Ishaja yodonga lwe-USB enoyilo oluhlengahlengisiweyo lweplagi ikuvumela ukuba unqande ukuvimba ezinye iindawo zokuphuma kunye nokubekwa kwakhona kwizibuko le-USB A / C ukuze ibekwe ngokulula intambo eqhagamshelwe- ngakumbi iluncedo xa usebenzisa umtya wombane okanye umkhuseli wokunyuka kunye neendawo ezininzi. Ishaja yeDVD ye-USB enokuhanjiswa kwamandla okrelekrele, ukwandisa ukusebenza ngokukuko kwezixhobo ezizodwa okanye ezininzi.
*I-Usb eninzi itshaja ekhawulezayo ye-100W Ipharamitha
Lobukhulu: 63 * 63 * 30.5mm
I-USB-C1: 5-15V / 3A, 20V / 5A (Max 100W)
I-USB-C2: 5-15V / 3A, 20V / 5A (Max 100W)
I-USB-C3: 5-15V / 3A, 20V / 5A (Max 100W)
I-USB-C1 + C2: 65W + 30W (iMax 95)
I-USB-C1 + C3: 65W + 30W (iMax 95)
I-USB-C1 + C2 + A: 45W + 30W + 18W (Max 93W)
I-USB-C1 + C2 + C3: 45W + 30W + 18W (uMax 93W)
I-USB-C1 + C2 + C3 + A: 45W + 30 + 12W + 12W
Amandla aPhezulu I-100w Gan Pd Tshaja
Inikezela nge-100W enkulu yamandla okutshaja-anele ukubiza ii-laptops ezi-2 ze-USB-C kunye nee-smartphones ezi-2 ngaxeshanye. Iziphumo ze-USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 20V = 5A. Isiphumo se-USB-5V = 2.4A ubuninzi kwizibuko ngalinye.
Ukwabiwa kwaMandla okrelekrele Mincwadi yeencwadi Iphero Charger
Inika ukuya kuthi ga kwi-100W yamandla okutshaja ngelixa isixhobo esinye sixhunyiwe kwizibuko le-USB-C, okanye sisasaza imveliso ukuya kuthi ga kwizixhobo ezi-4 ezixhunyiwe. Oku kwenza isantya esipheleleyo sokutshaja kwizixhobo ezininzi ngaxeshanye.
Ukuhambelana kwendalo yonke i-QC 3.0 Wall Charger
Ukulungiswa kokusebenza ngokungenasiphako ngeefowuni ze-USB-A kunye ne-USB-C, iitafile, iilaptops, kunye nokunye, kubandakanya i-15-intshi iMacBook Pro, i-2018 MacBook Air, kunye ne-13 intshi iDell XPS, njl.
Ukutshaja ngokukhawuleza i-Usb kwitshaja ekhawulezayo
Oko kunokusebenza kumandla ombane aphezulu kunye nokutshintsha rhoqo okukhokelela kwitshaja ezincinci nezisebenza kakuhle
Okulandelayo: Amandla okuhamba aphezulu amandla aphezulu angama-65W uhlobo c pd usb kwitshaja PD65W